विश्व मुटु दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा प्रभातफेरी - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ विश्व मुटु दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा प्रभातफेरी
विश्व मुटु दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा प्रभातफेरी
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७६ असोज १२ गते, १६:५४ मा प्रकाशित
वीरगञ्ज-विश्व मुटु दिवसको अवसरमा नेपाल चिकित्सक संघ नारायणीको अगुवाईमा आइतबार वीरगञ्जमा विविध कार्यक्रम मनाइएको छ । कार्यक्रममा मुटु रोग विशेषज्ञ डा. अरुणकुमार कर्णले मुटु रोग जो कोहीलाई लाग्ने भएकाले सबै सजग हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
जन्मेको केही दिनदेखि पछिसम्म जोसुकैलाई मुटु रोग लाग्न सक्ने डा. कर्णले बताए । वरिष्ठ फिजिसियन डा. रोशन कुर्मीले स्वस्थ्य जीवन शैलीले मुटु स्वस्थ राख्ने बताए । ‘नियमित ब्यायाम गर्ने, तनाबरहित जीवनशैली अपनाउने, चिल्लो, गुलियो र नुन को मात्र खानामा कम गर्ने, रक्तचाप र मधुमेह सन्तुलित राख्ने, धुम्रपान नगर्ने र नियमित चिकित्सकको परामर्श गर्दा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रम हुनुअघि प्रभातफेरी आयोजना गरिएको थियो । वीरगञ्जको घण्टाघरबाट सुरु भएको प्रभातफेरी नगरपरिक्रमा गर्दै कोणसभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा तराई अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।